TRAFIKANA MOTO HALATRA : Telo lahy voasambotry ny avy ao amin’ny Fip Toamasina
Matotra ny fiaraha-miasa eo amin’ny vahoakan’i Foulpointe sy ny hery vonjy taitra avy amin’ny Polisim-pirenena eto Toamasina na ny Fip. Ny takarivan’ny sabotsy 18 novambra lasa teo, nisy môtô very tao Foulpointe, nipetraka teo anoloan’ny trano fisotroana. 21 novembre 2017
Niantso avy hatrany ny Fip eto Toamasina ilay tompona môtô nisy nangalatra.Nanao savahao teny amin’ny lalam-pirenena fahadimy avy ao Foulpointe nihazo an’i Toamasina ny Fip. Tsy lavitra ny barazin’ny Fip eo Ambodimanga lalam-pirenena fahadimy ny andron’ny alahady 19 novambra tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina, dia sarona ilay môtô halatra sy ny mpitondra azy. Izy, izay niaraka tamin’ny namany roa lahy.
Mbola môtô halatra ihany koa no noentin’ireto farany, izay tsy nahitana taratasy. Izany hoe halatra avokoa ireo motô nentin’izy ireo avy tany Foulpointe nihazo an’i Toamasina.Nilaza ny kaomandin’ny hery vonjy taitra Toamasina, ny Kaomisera Rafaliarivo Jules, fa efa nanana vaovao momba azy telo lahy ireo ny tenany. Fantatra araka izany fa mpangalatra no sady mpibizina kodiaran-droa halatra ireto tratra ireto. Izy ireo izay samy monina ao Toamasina : Falinirina 26 taona monina ao Tanamakoa, Joël 30 taona monina ao amin’ny Cité Canada ary Andrianiaina Christophe 24 taona mipetraka ao Salazamay.
Foulpointe, Analanjirifo, Toamasina no toerana falehan’ireo jiolahy
Mangalatra moto avy ao Toamasina izy telo lahy, dia entina amidy any Foulpointe ka hatrany Mananara-Avaratra. Rehefa lafo ny entana nalaina avy tao Toamasina, dia mandeha any Analanjirofo sy Foulpointe indray, dia entina amidy any Toamasina.
Ny iray amin’ireo môtô halatra tratra tamin’izy telo lahy dia efa tafaverina soa aman-tsara amin’ny tompony fa ny roa kosa dia mbola ao amin’ny biraon’ny Fip Ankirihiry-Toamasina. Ka am-pandrenesina izay olona mety ho very môtô tao Foulpointe na tao Toamasina mba hanatona ny biraon’ny Fip. Mitondrà taratasy feno sy filazana fahaverezana.
Ankoatra ireo roa hafa izay mbola tsy fantatra tompony, dia mbola misy môtô halatra iray saron’ny Fip tao Toamasina ihany koa miandry ny tompony ao amin’ny biraon’ny hery vonjy taitra. Aza hadinoina mihitsy ny mitondra taratasy feno sy filazam-pahaverezena. Aleo hiverina amin’ny vahoaka ny fananan’ny vahoaka, hoy ny lehiben’ny Fip, Kaomisera Rafaliarivo Jules. Izy, izay nanamafy fa miasa ho an’ ny vahoaka hatrany ny polisy hery vonjy taitra Toamasina.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1929) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021